रातो कार्डिनल बाइबलीय अर्थ प्रतीकवाद, विश्वास र आध्यात्मिक - बाइबलीय अर्थ
सिरीले आवाजको जवाफ दिंदैन
एप स्टोर आईफोन संग जोड्नुहोस्
& t मा क्यारियर अपडेट
रातो कार्डिनल बाइबलीय अर्थ - विश्वास को कार्डिनल प्रतीक
ईसाई धर्म मा कार्डिनल बर्ड प्रतीक
रातो कार्डिनल को अर्थ। चराहरु, विशेष गरी कबूतरहरु, लामो समय देखि पवित्र आत्मा को एक प्रतीक भएको छ । पवित्र आत्मा को renderings सामान्यतया दुई तत्वहरु, सेतो बत्ती वा रातो आगो को एक हुन्छ। सेतो कबूतर आत्मा को प्रकाश मा पवित्रता र शान्ति को प्रतिनिधित्व गर्दछ रातो कार्डिनल आगो र जीवित आत्मा को जीवन शक्ति को प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
यसको अतिरिक्त, कार्डिनल ख्रीष्टको जीवित रगतको प्रतीक हो।
रातो कार्डिनल पक्षी । दुबै कार्डिनल र रगत लामो समय देखि जीवन शक्ति को प्रतीक भएको छ, र ईसाई सन्दर्भ मा, त्यो जीवन शक्ति अनन्त छ। उहाँको रगतद्वारा हामी जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न, उहाँको महिमा गर्न, र उहाँको आनन्द लिन पाप बाट मुक्त छौं सदाको लागी । परम्परागत रूपमा, कार्डिनल जीवन, आशा र बहाली को प्रतीक हो।
यी प्रतीकहरु जीवित विश्वास को लागी कार्डिनल पक्षीहरु लाई जोड्छन् , र त्यसोभए उनीहरु हामीलाई सम्झाउन आउँछन्, यद्यपि परिस्थितिहरु अन्धकार, अँध्यारो र निराशाजनक लाग्न सक्छ, त्यहाँ सधैं आशा छ।
ईसाई विश्वास को कार्डिनल व्यक्ति येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ । ख्रीष्टको जीवित रगतमा विश्वासको प्रतिनिधित्व गर्ने वास्तविक रातो पखेटा भएको कार्डिनल पक्षी बाहेक, त्यहाँ 'कार्डिनल' शब्द को उत्पत्ति मा निहित चार धेरै रोचक कार्डिनल पक्षहरु छन्। यी कार्डिनल पक्षहरु दुबै ऐतिहासिक र प्रतीकात्मक रूप मा ख्रीष्ट संग सम्बन्धित छन्।
तल तपाइँ देख्नुहुनेछ कि त्यहाँ चार प्रमुख शब्दहरु छन् कि शब्द कार्डिनल को मूल अनुवाद बाट स्टेम छन्।
उनीहरु: कुञ्जी, काज, मुटु र क्रस। यी चार कार्डिनल पक्षहरु को रूप मा उनीहरु ईसाई परम्परा संग सम्बन्धित छन् वास्तव मा विश्वास, ख्रीष्ट र कार्डिनल्स को बारे मा तपाइँ को लागी केहि नयाँ विचारहरु खोल्न सक्छन्।
कार्डिनल पक्षी अर्थ
चराहरु, उदाहरण को लागी, महान प्रतीकवाद संग भरीएको छ। उनीहरु राजसी प्राणीहरु हुन् जसले हामीलाई महत्वपूर्ण सन्देशहरु ल्याउँछन् र यदि हामी उनीहरुलाई ध्यान दिएर अवलोकन गर्न जान्दछौं, हामी उनीहरुलाई उनीहरुको फ्ल्यापि through मार्फत सुन्नेछौं।
कार्डिनल आफ्नो रातो पिसारा को लागी सबैभन्दा हड्ताल चराहरु मध्ये एक हो। यसले हामीलाई जीवन मा धेरै रहस्यहरु को बारे मा सिकाउँछ, मा सार्न को लागी शक्ति खोज बाट, हाम्रा प्रियजनहरु जो बितिसकेका छन् संग पुन: जडान गर्न को लागी।
हमिंगबर्डको रूपमा, कार्डिनलहरू शताब्दीयौंदेखि आध्यात्मिकताले घेरिएको विश्वास गरिन्छ। उच्च श्रेणीका क्याथोलिक व्यक्तिहरुलाई कार्डिनल भनिन्छ र गाढा रातो वस्त्र लगाउँछन्। मूल निवासी अमेरिकी संस्कृतिहरु विश्वास गर्छन् कि कार्डिनलहरु सूर्य को छोरी हुन् र यदि तपाइँ एक कार्डिनल उचाई माथि उडिरहेको देख्नुहुन्छ, तपाइँ राम्रो भाग्य पाउनुहुनेछ।
जब तपाइँ एक कार्डिनल भेट्नुहुन्छ हुन सक्छ किनकि तपाइँ आफ्नो शक्तिमा शंका गर्दै हुनुहुन्छ र यो आत्मविश्वास र प्राप्त गर्न को लागी एक अनुस्मारक हो बाटो मा बाधा को बावजुद अगाडि बढ्नुहोस्।
अर्को विश्वास यो हो कि कार्डिनल आध्यात्मिक दूत हुन्। धेरै मानिसहरु एक मायालु गुमाए पछि कार्डिनल बारम्बार देखेको उल्लेख छ। Cardinals पठाउन सकिन्छ तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँको मायालु एक अझै पनी तपाइँ संग छ।
त्यहाँ धेरै कारणहरु छन् किन मानिसहरु कार्डिनल लाई एक शक्ति जनावर भन्छन्। जो नयाँ घर मा जान्छन् वा जागिर परिवर्तन गर्छन् कार्डिनलहरु को माध्यम बाट प्राप्त गर्न को लागी एक उत्कृष्ट गाइड पाउनुहोस्। यस चरा को सुरक्षात्मक प्रकृति मानिसहरु लाई मात्र आफ्नो क्षेत्र को रूप मा प्रभावी ढंग बाट रक्षा गर्न को लागी शक्ति प्रदान गर्दछ।
कार्डिनल प्रतीकवाद मुख्यतः यसको उज्यालो रातो रंग को कारण हो, यसको कुरकुरा तर गूंज गीत, र यसको अद्वितीय विशेषताहरु। फिन्च परिवार को यो सदस्य धेरै चीजहरु को प्रतीक हो, भावुक रोमान्स देखि उग्र नेतृत्व को लागी। उहाँ चुनौतीपूर्ण मौसम को दौरान आफ्नो साथी लाई गाउनुहुन्छ, एक गीत धेरै जसो पक्षी दर्शकहरु को रूप मा वर्णन एक रमाईलो ऊर्जावान र मायालु गीत।
यो चरा को प्रतीकवाद पनि ठूलो मूल्य र सम्मान छ, विशेष गरी मा ईसाई परम्परा। यो एकता र विविधता हो कि हामीलाई हाम्रो मानव पक्ष को सम्झना छ।
जब एक कार्डिनल हाम्रो सपनामा देखा पर्दछ , हामी महसुस गर्न सक्छौं कि हामी एक महान तौल बाट जारी गरीरहेका छौं। यही कारण हो कि प्राचीन र आदिम संस्कृतिहरु यी चराहरु लाई स्वर्ग को नजिक को प्राणीहरु को रूप मा मानीन्छ।
रातो कार्डिनलको चिन्ह
त्यहाँ एक देख्न को लागी कुनै महत्व छ रातो कार्डिनल ? जब मेरो साथी क्रिस एक चमत्कार को लागी उसको कुकुर एली लाई निको पार्न भगवान मा विश्वास गरीरहेकी थिईन्, उनी प्राय यो विशिष्ट चरा लाई देखीन् जब उनी आफ्नो कसरत को पैदल यात्रा समाप्त गरीन्। यो फरक पर्दैन कि उनी कहाँ थिइन् - नजिकैको लेक पाइन ट्रेलमा वा उनको घर मा फिर्ता, उनले विश्वासपूर्वक यो सुन्दर चरालाई देखीन्।
क्रिसले मलाई भन्नुभयो कि उनी वास्तव मा घर आउन को लागी मात्र हेर्न को लागी कि उनी यो चरा भेट्टाउछिन्। कुनै न कुनै तरिकाले यो येशू को रगत को पुष्टि हो कि हामी सबै को लागी बगाईयो। कुनै न कुनै तरिकाले यो थाहा पाउँदा उसलाई थाहा भयो कि भगवानले उनीहरुको बिरामी कुकुरको लागी प्रार्थना सुन्नुभयो।
भर्खरै उनको छोरा एरिकले उनलाई भने कि उनले एली को उपचार को चमत्कार को लागी पर्खिरहेको बेला रातो कार्डिनलहरुको दर्शन पनि देखे। के भगवानले उनीहरुको विश्वास लाई प्रोत्साहित गर्न यो प्रतीक को उपयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो?
हामी किन यो अनौठो लाग्छ कि भगवान भौतिक संकेतहरु को उपयोग गरेर बोल्नु हुन्छ? सम्पूर्ण बाइबल मा , परमेश्वरले आफ्नो वचनको पुष्टि गर्न चिन्ह र चमत्कारहरु प्रयोग गर्नुभयो। वास्तव मा, जब येशू क्रुस मा मर्नुभयो, त्यहाँ पक्कै असामान्य घटनाहरु भएको थियो। सारा जग्गामा तीन घण्टा सम्म अन्धकार थियो ( मार्क 15:33 )।
मन्दिरको पर्दा माथिबाट तल सम्म दुई टुक्रा भयो र पृथ्वी हल्लायो। ( मत्ती 27:51 )। यो पनि भनिएको छ कि उहाँको पुनरुत्थान पछि चिहानहरु खोलिएको थियो र धेरै संतहरु को शरीर जो सुतिसकेका थिए उठाइयो। ( म्याट 27: 52-53 )। यी ठूला संकेतहरु थिए, तर कसरी यति धेरै उनीहरुलाई छुटे?
के यो यस कारण थियो कि मानिसहरु हेरिरहेका थिएनन् र सुन्दै थिएनन्? म मेरो आफ्नै दृश्यहरु मध्ये एक कहिल्यै बिर्सने छैन। एक दिन मैले २ सुन्दर पुतलीहरु मेरो घर को पछाडिको ढोकामा झण्डै १ घण्टा देखे। यो अनौठो लाग्यो, तर म मंत्रमुग्ध र प्रार्थना गरें। मलाई लाग्यो कि प्रभु मलाई निको पार्ने उहाँको प्रतिज्ञा बोल्दै हुनुहुन्छ किनकि तितलीहरु सामान्यतया स्वतन्त्रताको प्रतीक हुन्।
जब मैले अन्तमा पछाडिको ढोका खोलेँ, उनीहरु टाढा गए जब मैले मेरो हृदयमा यो भव्य अनुभव टक गरे। जबकि तपाइँ यो घटना अजीब सोच्न सक्नुहुन्छ, यो मेरो साथी, आदर्श हुनुपर्छ।
मलाई विश्वास छ भगवानले रचनात्मक तरिकाहरु को सबै प्रकार को उपयोग गरेर आफ्ना मानिसहरु संग कुरा गर्न मन पराउनुहुन्छ - प्राकृतिक संकेत र प्रतीकहरु को उपयोग गरेर पनि। वास्तव मा, दुबै क्रिस र म विश्वास गर्दैछौं कि तपाइँ पनि भगवान एक संकेत को माध्यम बाट तपाइँ संग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सायद यो एक रातो कार्डिनल अनुभव हुनेछ? वा सायद छैन? तर जे होस् यो हो - यो तपाइँको लागी केहि व्यक्तिगत हुनेछ।
मृत्यु पछि रातो कार्डिनल देख्दै
एक आध्यात्मिक दूत
कार्डिनल आत्मा को सन्देशवाहक हो भन्ने धारणा धेरै संस्कृतिहरु र विश्वासहरु मा अवस्थित छ। नतिजाको रूपमा, धेरै चीजहरु कार्डिनल को पदनाम छ। तिनीहरू कार्डिनल रंग, कार्डिनल दिशाहरु, र कार्डिनल स्वर्गदूतहरु सामेल छन्। एक कार्डिनल पदनाम महत्व को संकेत गर्दछ।
शब्द कार्डिनल ल्याटिन शब्द बाट आउँछ थिसल , काज वा अक्ष को अर्थ। एउटा ढोका को काज जस्तै, कार्डिनल पृथ्वी र आत्मा को बीचको ढोकामा काज हो। उनीहरु पछाडि र पछाडि सन्देश बोक्छन्।
धेरै मिथक र परम्परागत कार्डिनल वरपर नवीकरण, राम्रो स्वास्थ्य, खुसी सम्बन्ध, मोनोग्यामी, र सुरक्षा संग गर्न को लागी छ। एक कार्डिनल को जीवन मा हेर्दै, यो हेर्न को लागी यो किन यति धेरै राम्रो संघहरु छन् सजीलो छ। उदाहरण को लागी, कार्डिनल्स जीवन को लागी साथी। साथै, उनीहरु गैर-प्रवासी चराहरु हुन् त्यसैले उनीहरु आफ्नो तत्काल क्षेत्र मा सबै आफ्नो जीवन रहन्छन्, आफ्नो मैदान को रक्षा। र दम्पती को जन्म पछि, दुबै आमा बुबा स्वास्थ्य, कल्याण, र आफ्नो परिवार को एकाइ को सुरक्षा आश्वासन संगै काम गर्छन्।
यदि तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि कार्डिनलहरु आत्मा बाट सन्देशवाहक हो, तब अर्को पटक तपाइँ एक तपाइँको ध्यान प्राप्त गर्न को लागी जोर दिइरहनुभएको छ, आफैंलाई यी प्रश्नहरु सोध्नुहोस्: के वा तपाइँ त्यो पलमा के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो? के तपाइँ आत्मा बाट मार्गदर्शन को लागी सोध्नुभयो वा एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उत्तर खोज्न मद्दत को लागी सोध्नुभयो? तपाइँको कार्डिनल दृश्यहरु लाई तपाइँ शान्ति को भावना ल्याउन अनुमति दिनुहोस्।
जान्नुहोस् कि आत्मा सुन्दै हुनुहुन्छ। रातो कार्डिनल भ्रमणहरु तपाइँलाई सम्झाउनुहुन्छ कि आत्मा सधैं मार्गदर्शन र तपाइँलाई बचाउँछ। सबै भन्दा माथि, आफ्नो कार्डिनल मित्रहरु र आत्मा को मार्गदर्शन को लागी धन्यवाद दिन नबिर्सनुहोस्।
बाइबल को पक्षी
यसको मतलब के हुन्छ जब भगवान कार्डिनल पठाउनुहुन्छ?।
परमेश्वरको वचन मानिसलाई मुक्ति को बाटो बताउन दिइएको छ। यो प्रकृतिको किताब हुनको लागी होइन। जे होस्, यसमा प्राकृतिक संसार को सन्दर्भ को एक भीड हो, ती मध्ये धेरै आध्यात्मिक सत्यहरु लाई उजागर गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। बाइबल को पक्षी एक्लै अध्ययन को लागी एक आकर्षक स्प्रिंगबोर्ड प्रदान गर्दछ।
बाइबल मा लगभग ३०० पदहरु छन् कि चराहरुको उल्लेख छ। यी मध्ये एक सय भन्दा बढी मात्र शब्द को उपयोग कुखुरा वा चरा, प्रजाति मा अनुमान गर्न पाठक छोडेर। यो नोट गर्न को लागी रोचक छ कि पुरानो नियमका लेखकहरु लाई चराहरु को बारे मा अधिक थाहा थियो, र स्पष्ट रूप मा नयाँ नियम को लेखकहरु को तुलना मा चराहरु मा अधिक चासो थियो। पल, उदाहरण को लागी, उनको सबै पत्रहरुमा मात्र दुई पटक चराहरु लाई बुझाउँछ।
चराहरु विरलै जनावर साम्राज्य को अन्य सदस्यहरु संग पनी दुई विशिष्ट विशेषताहरु - पखेटा र पखेटा संग भ्रमित छन्। चूंकि उनीहरु यी प्रमुख विशेषताहरु छन्, एक सजीलै देख्न सक्छन् कि केहि बाइबल लेखकहरु चराहरु को बारे मा सोच्दै थिए जब उनीहरु उड्ने, पखेटा, र पखेटा जस्ता शब्दहरु को उपयोग गरे।
बाइबल कत्तिको उपयुक्त पक्षीहरु लाई आध्यात्मिक पाठ सिकाउन को लागी प्रयोग गर्दछ। यस जीवन को चिन्ता द्वारा एक घेर कविता आउँछ: प्रभु मा म मेरो भरोसा राख्छु: तपाइँ मेरो आत्मा लाई कसरी भन्नुहुन्छ, तपाइँको पहाडमा चरा जस्तै भाग्नुहोस्? (भजन ११: १)। एक को लागी जो शैतान को षड्यन्त्र बाट बचिएको छ पाठ हो, हाम्रो आत्मा पासो को बाहिर चरा को रूप मा भागेको छ (Ps। १२४:))।
एक को लागी जो समस्या को कारणले अन्योलमा छ त्यहाँ रेकर्ड गरिएको छ, जसरी उडिरहेको छ भैया, उड्ने मा एक निगल जस्तै, एक श्राप जो कारणहीन छ उडाउँदैन (हितैषी २:: २ आरएसभी)। जो अविश्वासीहरु लाई भविष्यवाणी दिइन्छ किन उचाईन्छ बुझ्न सक्दैनन्, उनीहरुको महिमा चरा जस्तै उडेर जान्छ (होशे:: ११)।
आत्म-दयाले भरिएको मान्छे को लागी किनकि उनी सबै आधुनिक सुविधाहरु संग आशीर्वाद छैन, येशू भन्नुहुन्छ, हावा को चराहरु गुँडहरु छन्; ... तर मानिसको पुत्रको टाउको राख्ने ठाउँ छैन (मत्ती 8:20)।
पुरातन इजरायलको मनपर्ने चरा ढुकुर भएको जस्तो लाग्छ। यो बुझ्न सजिलो छ, प्यालेस्टाइन को चट्टान कबूतर को लागी प्रचुर मात्रामा थियो। यो चट्टानहरु को छेद मा नेस्टेड कि सुखद घाटीहरु लाई सुरक्षित गरीयो।
यो कोमल र सुन्दर चरा आफ्नो dovecote को लागी एउटै माया र आफ्नो साथी को लागी उही निष्ठा थियो कि हाम्रो शोक कबूतर आज छ। कुनै आश्चर्य छैन कि यो भजन मा स्नेहपूर्वक यस प्रकार बोलेको थियो: एउटा ढुकुरको पखेटा चाँदीले ढाकिएको छ, र पहेँलो सुनको साथ उसको पखेटा (भज। 68:13)।
बाढीको पानी कती कम भयो भनेर निर्धारण गर्न नूहले कबूतर छोडे। यो येशूको बप्तिस्मा मा पवित्र आत्मा को प्रतीक को रूप मा प्रयोग गरीएको थियो। जो गरीब थिए एक बलिदान को बलिदान को लागी एक थुमा को ठाउँ मा एक ढुकुर को उपयोग गर्न सक्छन्।
मरियम र यूसुफ को, येशू को आमा बुबा, यो पनि भनिएको छ: र जब मोशा को कानून अनुसार उनीहरुको शुद्धीकरण को लागी समय आयो, उनीहरु उनलाई प्रभु को समक्ष यरूशलेम ल्याए। । । र बलिदान चढाउन। । । , 'कछुवाको एक जोडी, वा दुई जवान कबूतर' (लूका २: २२-२४, आरएसभी)।
कबूतर एक राष्ट्र को रूप मा इजरायल को लागी एक रबिन प्रतीक थियो। — एसडीए बाइबल शब्दकोश, पृ। २8. यो तथ्यले पदलाई बिशेष महत्व दिन्छ, तिमी सर्प जस्तै बुद्धिमानी बन, र ढुकुरहरु जस्तै हानिकारक बन (मैट १०:१16)। यो भन्न को लागी थियो, होशियार हुनुहोस्, सावधान रहनुहोस्, बुद्धिमान हुनुहोस्, तर यी सबै मा, याद गर्नुहोस् कि तपाइँ यहूदी हुनुहुन्छ। निर्दोषता, कोमलता, र कबूतर को हानिकारक जो तपाइँको रहस्यमय प्रतीक भएको छ राख्नुहोस्।
उही उपयुक्त प्रतीकवाद को उपयोग गरी, अगमवक्ता यशैया यहूदीहरु को भगवान को पूजा गर्न को लागी ठूलो संख्या मा अन्यजातिहरु को दर्शन थियो; र उनीहरु पनि कबूतर को समान ennobling गुण अधिकारी हुनेछ: यी को हुन् जो बादलको रूपमा उड्छन्, र उनीहरुको झ्यालहरुमा ढुकुर को रूपमा? (ईसा। :०:))।
यसको शक्तिशाली पखेटाहरु संग चील, यसको भयंकर talons, यसको तेज घुमाउरो चोंच, र यसको शिकारी बानी अक्सर पुरानो नियम मा इजरायल को मेजबानहरुलाई प्रोत्साहित गर्न र उत्तेजित गर्न को लागी प्रयोग गरीएको थियो। ट्र्याकलेस उजाडस्थानमा, जहाँ उनीहरु प्रायः भगवानको हेरचाह र न्याय मा भरोसा गर्न र उहाँको कानून को पालन गर्न मा असफल भए, उनीहरु संग उनीहरु संग यसरी पुन: विचार गरे: तिमीले देखेका छौ कि मैले मिश्रीहरु लाई के गरें, र कसरी मैले तिमीहरुलाई ईगल को पखेटा मा बेर्ने, र ल्याए। तिमी आफैंलाई।
अब तेसैले, यदि तपाइँ साँच्चै मेरो आवाज मान्नुहुन्छ, र मेरो करार पालना गर्नुहुन्छ, तब तपाइँ मेरो लागी सबै मानिसहरु भन्दा एक अनौंठो खजाना हुनुहुनेछ (प्रस्थान १:: ४, ५)।
इस्राएललाई थाहा थियो कि भगवान के बारे मा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उनीहरु अरबको जंगलमा थिए। यो ईगल देश थियो। दैनिक उनीहरूले यी राजसी जंगली चराहरु लाई आफ्नो शिविर को घाटी भरि उडिरहेको देखे। पाठ प्राथमिक र स्पष्ट थियो। उनीहरु, उहाँका मानिसहरु, उनीहरुको समस्याहरु भन्दा माथि उड्नेछन्। उहाँको शक्तिको सुरक्षामा उनीहरु आँधीबेहरी हँसिनेछन् कि उनीहरु को बारे मा हरायो - यदि उनीहरु उहाँको वाचा राखे। कुनै आश्चर्य छैन कि उनीहरु सबैले जवाफ दिए कि प्रभु बोल्नुभएको छ हामी गर्छौं (प्रस्थान १::))!
दाऊदको पुस्ताको दौरान यो ईश्वरीय हेरचाह र अनुग्रह संरक्षण भजनहार आफैंले उही प्रतीकवाद को प्रयोग गरी आवाज उठाउनुभएको थियो: उसले तपाइँलाई आफ्नो पखेटाले ढाक्नेछ, र उसको पखेटा मुनि तपाइँ भरोसा गर्नुहुनेछ (भजन 1 १: ४)। र सम्भवतः ईगल को भाग मा ऊर्जा को नयाँ spurts कल्पना, सम्भवतः molting पछि, दाऊद फेरि भगवान को आशिष् को बारे मा लेख्छन्: जो राम्रो कुराहरु संग तपाइँको मुख सन्तुष्ट; ताकि तेरो युवावस्था ईगल जस्तै (Ps। १०३: ५) लाई नवीकरण गरियो।
यो इजरायल द्वारा बुझिएको थियो कि भगवानले उनीहरुलाई आत्मसन्तुष्टि मा बसोबास गर्न को लागी परीक्षण को अनुमति दिन को आवश्यकता हुन सक्छ, तर यी परीक्षणहरुमा उहाँले तिनीहरूलाई त्याग्नुहुन्न। जसरी एउटा चीलले उसको गुँडमा हलचल मच्चाउँछ, उसको जवान माथि fluttereth, उसको पखेटा बाहिर फैलिएको,। । । उनको पखेटामा बोक्छन्: त्यसैले प्रभु एक्लै उहाँको नेतृत्व गर्नुभयो (Deut। ३२: ११, १२)।
कहिलेकाहीँ भगवान अनिच्छुक रूपमा उहाँका मानिसहरुको विद्रोही बिन्ती मा स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसोभए जब उहाँले इस्राएललाई बंगाललाई उजाडस्थानमा खान दिनुभयो। जे होस् भगवानले इजरायल को लागी शाकाहारी भोजन को योजना बनाईएको हो, उनीहरु मिस्र को मासु को भाँडाहरु मा यति लामो समय सम्म बाँचेका थिए कि उनीहरु लाई प्रदान गरीएको खाना संग सन्तुष्ट थिएनन्, यद्यपि यसको केहि स्वर्गीय मन्ना विशेष गरी र चमत्कारिक रूप बाट दिइएको थियो।
मोशा, केहि हद सम्म गुनासो गर्ने मेजबान संग धैर्य बाट, उनीहरुलाई भन्यो, नडराउनुहोस्, चुप लाग्नुहोस्, र प्रभुको मुक्ति हेर्नुहोस्, जुन उहाँले आज तपाईलाई देखाउनुहुनेछ (प्रस्थान १४:१३)। उनको उदात्त विश्वास शिविरमा यति धेरै संख्यामा बटेर गिरने को शानदार घटना मा पुरस्कृत भएको थियो कि उनीहरु ती सबै को उपयोग गर्न सक्दैनन्। त्यो दिन भगवानले उनीहरु मा मासु को रूप मा धूलो को रूप मा, र पंख को पंखहरु जस्तै समुद्र को बालुवा (Ps। 78:27) को वर्षा भयो।
यो धेरैले सोचेका छन् कि भगवानले प्राकृतिक परिस्थितिहरु को उपयोग गर्नुभयो, जस्तै कि उसले अन्य समयमा गरेको छ, यो बारे मा ल्याउन को लागी। यो वर्षको समय थियो जब यी बटेरहरु पलायन गर्दै थिए, र यो महान बगालको भूमध्यसागर वा लाल सागर को एक भाग मा पार गर्न को लागी प्रचलन थियो। यो भारी शरीर र साना पखेटा भएको चराहरु को लागी एक लामो र थकाउने यात्रा हो, र ती मध्ये धेरै थकीत थिए जब उनीहरु भूमि सम्म पुग्यो, र सजीलै पकडिएको थियो। कुनै पनी अवस्थामा, उनीहरु सामान्यतया जमीन को नजिक उड्छन् र जाल संग समात्न सकिन्छ।
एक प्राकृतिक घटना हो वा होइन, प्रभुले यो देख्नुभयो कि बगाल सामान्य भन्दा ठूलो थियो; उनिहरु सही ठाउँ मा providentially अवतरण; र समय चमत्कारिक थियो। उनीहरुको भोकमा कुनैपनि मासुले उनीहरुको विकृत भोकलाई सन्तुष्ट पार्ने थियो, तर भगवानले आफ्नो दयालु कृपामा उनीहरुलाई बटेर मासुको नाजुकता दिनुभयो।
बाइबल को कुनै एक अध्याय मा चराहरुको सबैभन्दा लामो सूची लेवी ११ मा पाइन्छ (एक समान एक Deuteronomy 14 मा छ)। यो सूची अशुद्ध चराहरु बाट बनेको छ। हामी सबै कारणहरु जान्दैनौं कि भगवानले केहि चराहरु र जनावरहरु लाई खान को लागी अनुमति दिईयो र अरु लाई निषेध गरीयो, तर हामी जान्दछौं कि यस सूची मा धेरै मांसाहारी चराहरु सामेल छन्। केहि लेखकहरु लाई लाग्छ कि रगत बगाउने पवित्र अनुष्ठान शामिल थियो। इजरायल लाई खाना को लागी रगत को उपयोग गर्न को लागी अनुमति थिएन, न त उनीहरु मांसाहारी चराहरु कि रगत सहित आफ्नो शिकार को सबै भाग खाएको स्पष्ट रूप देखि खान को लागी अनुमति थियो।
अनुवादकहरु यी अशुद्ध चराहरु को अंग्रेजी नाम को सन्दर्भ मा फरक छ, तर हामी यो भन्न को लागी लगभग सही हुनेछ कि सूची मा निम्न समावेश छ: गिद्ध, ईगल, पतंग, बाज, buzzards, रेवेन, बदमाश, उल्लू, बाज, ospreys, सारस, बगुला, र cormorants, जो सबै मांसाहारी, वा सफाई कर्मचारी हुन्।
भन्न को लागी अजीब छ, सूची मा ब्याट, जो बिल्कुल एक पक्षी छैन शामिल छ। ती दिनहरुमा, वैज्ञानिक ज्योतिषी वर्गीकरण हुनु भन्दा पहिले, इस्राएलीहरु शायद बुझ्न सक्दैनन् यदि ब्याट समावेश गरिएको थिएन। यो उड्छ, हैन?
माथिको सूची धेरै आकार को चराहरु, ग्रिफन गिद्ध देखि आठ फिट को पंख फैलाएको संग सानो आठ इन्च scops उल्लू सम्म छन्। केहि उडिरहेका छन्, जस्तै ईगल, गिद्ध, गुञ्जा, र हक; केहि पक्कै पानी चराहरु, osprey, बगुला, र cormorant रूपमा छन्; र केहि उल्टो को रूप मा निशाचर थिए।
यो रेवेन थियो कि भगवान एलिया को लागी खाना ल्याउन को लागी प्रयोग गरीयो। यी भोकमरी, अशुद्ध चराहरु हुन् कि सधैं भोकै लाग्छन्; र तैपनि उनीहरुले अगमवक्तालाई अनिकालको समयमा जीवित राखे जब उनी आहाबको क्रोधबाट लुकेका थिए। मायालु होस् वा होइन, रेवेन्स भगवानको हेरचाहमा छन्। उहाँले उनीहरु र उनीहरुको जवान (अय्यूब ३::४१) को लागी प्रदान गर्नुहुन्छ, र चमत्कारिक ढंगले उनीहरुको एक सेवक को लागी प्रदान गर्न को लागी प्रयोग गर्नुभयो।
येशूले भँगेराको प्रयोग गरेर उहाँको सबैभन्दा बहुमूल्य पाठहरु मध्ये एक - प्रत्येक व्यक्तिको हेरचाह गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। यहाँ भँगेरा शब्द पक्कै एउटा सानो, रंगहीन चराहरु को हाम्रो भँगीहरु को दौड को समान हुनु पर्छ, किनभने यो स्पष्ट रूप मा थोरै व्यावसायिक वा भावनात्मक मूल्य थियो। के दुई भँगेरा टाढाको बिक्रि हुदैन? (मत्ती १०:२)। येशू भन्नुहुन्छ, उनीहरुसँग नडराउनुहोस् जसले शरीरलाई मार्छन्। । । । तपाइँको टाउको को धेरै कपाल सबै संख्यामा छन्।
तेसैले नडराऊ, तिमी धेरै भँगीहरु भन्दा धेरै मूल्यवान छौ (मत्ती १०: २-3-३१)। विशेष गरी यी परेशान समयमा यो जान्न को लागी आश्वस्त छ कि भगवान जो एक गिरने भैया को नोट पनि प्रत्येक व्यक्ति को लागी एक अझ बलियो प्रेम छ। उहाँ तपाइँको हेरचाह गर्नुहुन्छ; उहाँ मेरो ख्याल राख्नुहुन्छ। हामी उहाँमा हाम्रो भरोसा राखौं, जान्दछौं कि हामी उहाँको पखेटा मुनि आश्रित छौं।
चन्द्रमा को आसपास हेलो को बाइबलीय अर्थ
एक बाक देखी को बाइबलीय अर्थ
MELANIE नाम को बाइबलीय अर्थ
ईसाई सपना प्रतीकहरु: बाइबलीय सपना ...
सपनामा पानी को बाइबलीय अर्थ
Jared बाइबलीय आकृति - Jared के मतलब छ?